नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ बागलुङको अधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा पौडेल ! – ebaglung.com
नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ बागलुङको अधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा पौडेल !
२०७५ जेष्ठ ७, सोमबार १७:४०	Top News, थप समाचार
बागलुङ, २०७५ जेठ ७ । नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ बागलुङको सातौं अधिवेशन सोमबार सम्पन्न भएको छ । अधिवेशनको उदघाट्न गर्दै नेपाली काँग्रेस बागलुङका सभापति दिपेन्द्र बहादुर थापाले स्वस्थ्य समाज निर्माणको लागि स्वास्थ्यकर्मीहरुको समाजमा खेलको भुमिका निकै सराहनीय रहेको बताए । थापाले स्वास्थ्यकर्मी संघ काँग्रेसको शुभेच्छुुक संस्था भएका कारण आफ्ना शुभेच्छुकहरु प्रति आफुहरु सधैं जवाफ देही बन्ने बताएका छन । उनले सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेका लगानी अनुसार उचित किसिमको प्रतिफल प्राप्त गर्न नकिएको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघका केन्द्रिय अध्यक्ष रामजी घिमिरेले सरकारले स्वास्थ्यकर्मीहरुको उचित मुल्याङ्कन गर्न नसकेकोमा गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएका छन ।
कार्यक्रममा पुर्व सांसद एवं काँग्रेसका पुर्व पार्टी सभापति प्रकाश शर्मा पौडेल, पुर्व उपसभापति एवं महासमिति सदस्य जगदिशचन्द्र उपाध्याय, धौलागिरी अंचल अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डाक्टर सागर कुमार राजभण्डारी, संघका केन्द्रिय उपमहासचिव देवराज लामिछाने, केन्द्रिय कोषाध्यक्ष शंकर कंडेल, नेपाली काँग्रेस केन्द्रिय प्रशिक्षण विभागका पुर्व विज्ञ सदस्य एवं पुर्व स्वास्थ्य मन्त्रीका सल्लाहकार प्रताप पौडेल, नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन संघका केन्द्रिय सदस्य जगत पाठक, नेपाल महिला संघका जिल्ला अध्यक्ष शकुन्तला शर्मा, आधिकारीक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष तेजप्रसाद निउरे, ट्रेड युनियन काँग्रेस बागलुङका अध्यक्ष ईश्वर ठाकुर पौडेल, धौलागिरी अंचल अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष रामजी प्रसाद सुवेदी संघका संस्थापक अध्यक्ष शिव बहादुर केसी नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ पर्वतका अध्यक्ष याम प्रसाद पोखरेल, नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष रामप्रसाद खनाल राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मि संघ बागलुङका अध्यक्ष नारायण पौडेल, महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका हिरा खड्का लगायतले बोलेका थिए । कार्यक्रममा संस्थापक अध्यक्ष शिव बहादुर केसीलाई सम्मान गरिएको थियो ।
अधिवेशनले विष्णु प्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । समितिको उपाध्यक्ष खुल्लामा चन्द्र्र प्रसाद रेग्मी, महिलामा कान्तादेवी शर्मा, सरकारीमा लक्ष्मी प्रसाद निउरे, निजीमा खगेश्वर पौडेल, महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकामा लक्ष्मी जिसी, र समावेशीमा रामदेव कापरलाई चयन गरिएको छ । त्यस्तै सचिवमा शिव केसी युवा सचिवमा शुशिल पौडेल, सहसचिवमा चन्दन शाह, रमाकान्त सापकोटा,गिता शर्मा रहेका छन भने कोषाध्यक्षमा विपेन्द्र केसीलाई चयन गरिएको छ । समितिको सदस्यमा भुमिश्वर शर्मा, दुर्गा प्रसाद शर्मा, गोविन्द्र प्रसाद शर्मा, हरि पौडेल, सितास्मा रोका, राजेन्द्र थापा, प्रकाश विक र सविना बस्याल रहेका छन ।
अधिवेशनले केन्द्रिय प्रतिनिधि पनि चयन गरेको छ । जसमा देवप्रकाश घिमिरे, शिशिर पन्त, गणेश पौडेल, तारादेवी शर्मा र लक्ष्मी गौतम रहेका छन । त्यस्तै समितिको सल्लाहाकारमा शिव बहादुर केसी भुमिराज शर्मा, बृहस्पती कंडेल नरबहादुर थापा र झलकराज आचार्यलाई चयन गरिएको निर्वाचन अधिकृत हरि गौतमले जानकारी दिए । नेपाल स्वास्थ्यकर्मि संघ बागलुङका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेललको अध्यक्षता उपाध्यक्ष गणेश पौडेलको स्वागत र सचिव शिव केसीको संचालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
बुर्तिवाङमा भोलि हुने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विशाल सभालाई मुख्यमन्त्री गुरुङले सम्वोधन गर्ने !
पर्यटकीय स्थल अर्नाकोटमा सिँढी तथा भ्यू टावर निर्माण कार्य सुरु !